Wariyaashii Sweden oo la siidaayay iyo cadaynta oo bug ahayd | Somaliska
Labadii wariye ee Swedishka ahaa oo ku xirnaa Ethiopia ayaa isbuucaan la siidaayay ka dib markii ay cafisay dowlada Ethiopia. Wariyaasha oo sanadkii hore laga soo qabtay dhulka ismaamulka Soomaalida iyaga oo wehlinaya ONLF ayaa xabsi ku jiray 14 bilood.
Balse dowlada Ethiopia ayaa waxaa soo wajahday fadeexad ku saabsan Video loo isticmaalay in lagu maxkamadeeyo wariyaasha, vidowgaan oo muujinayay dagaal iyo wariyaasha oo lala qabtay ciidamada ONLF ayaa la sheegay in uu been abuur ahaa. Ciidamada Ethiopia ayaa sameeyay muuqaalka 2 maalmood ka dib markii la qabtay wariyaasha.
Sababta ay u sameeyeen ayaa lagu sheegay in ay ahayd in xabsi dheer lagu xukumo wariyaasha. Mid ka mid ah raggii duubay muuqaalka oo Soomaali ah ayaa fashilay videoga ka dib markii uu isaga cararay dalka Ethiopia.
Halkaan ka daawo muuqaalka bugta ah ee ay sameeyeen ciidamada Ethiopia.
mar.2 haday xuruyadooda dib uheleen waa soo dhaway nenaa waana ariin lagu farxo
zanaawi labadaan ishoodaa kasoo baxday kkkkkkkkkkkkkkkkk
Cidla ka wareera says:
kkkkkkkkkkkkk, walaahi waan qoslay, lkn doqonka muxuu u fashiliyey, caddaan waa sidaan u geli lahaa. viva ethiopia, waan ka xumahay in lasii daayey. waa dadkeenaba intaa waxaa waxay reer galbeedku ku xidhaan cadaalad daro cidna aan aany u hadlin
Weriyayaashaan waxey rabeen iney soo tebiyaan xaqiiqda ka jirta dhulka soomaalida ethiopa iyo dhibaatada shacabka soomaalida halkaas ku haysta ee kufsi, dil iyo dhacaba iskugu jirta. Markii ay wadanka galayeena vise la’aan ayay ku galeen maadaama aysan dowladda ethiopia u ogolaaneyn weriyaasha madaxa banaan iney halkaas booqdaan oo caalamku xaqiiqda meeshaa ka jirta uu ogaado. Dembi kale oo ay galeen ma jirto. Waana ku faraxsanahay iney dib xoriyadooda u heleen oo reerahoodiina ay ula midoobeen.
geerida Zenawi ayay ku heleen xuriyadooda.
May, Ilaahey amarkiis ee ku heleen, ee baqtigaas noloshiisa iyo dhimashadiisa kuma xirna.